Muuri News Network » Akhri: Dowlada FINLAND oo ku dhawaaqday War ka nixiyay Soomaali badan..
Akhri: Dowlada FINLAND oo ku dhawaaqday War ka nixiyay Soomaali badan..
Dowladda Finland ayaa shaacisay inay muwaadiniinta kasoo jeeda Soomaaliya, Iraq iyo Afgaistaan ku celinayso dalalkooda, kadib markii ay qiimayn ku sameysay xaaladaha nabad gelyo ee wadamadaas, iyadoo sheegtay inay yihiin wadamo ammaan ah oo lagu noolaan karo.
Qoraal kasoo baxay waaxda socdaalka iyo jinsiyadaha Finland ayaa lagu sheegay, in Finland ay aaminsan tahay in la joogo waqtigii ajaanibta wadamadaas kasoo jeeda ku laaban lahaayeen dalalkooda, waxayna intaas ku dartay inay ku adag tahay in magan gelyo lasiiyo dadka saddexdaan wadanu u dhashay.
Maamulka socdaalka Finland wuxuu dib u qiimayn ku sameeyay xaaladaha ammaan ee Afganistan, Iraq iyo Soomaaliya, iyadoo la ogaaday in horumar laga sameeyay amniga gudaha, taasoo suurto galinaysa in muwaadiniintu kusoo laaban karaan wadankooda, ayaa lagu yiri qoraalka waaxda Socdaalka.
Dhinaca kale, Wasaaradda arrimaha dibada ee dalka Finland ayaa weli ku talinaysa muwaadiniintooda inay ka feejignaadaan usafritaanka Soomaaliya, Iraq iyo Afganistan.
Dowladda Finland ayaa dhawaan dib u habaynta ku sameysay ammaankeda, waxayna aad u adkeysay in magan gelyo la siiyo dadka kasoo jeeda saddexda dal ee aan soo sheegnay.
ISHA WARARKA– OO–DHAN